Sideed timahaaga u ilaalisaa - iftineducation.com
Sideed timahaaga u ilaalisaa
aadan21 / September 18, 2012
iftineducation.com – Gabdho badan waxay ka cabsadaan in timahooda quruxdoodu ay tagto ama nafaqo beelaan, waxayna tamaniyaan in ay helaan habka ay ku soo celin lahaayeen quruxdii timahooda. Laakiin gabadh walbaa waa in ay ogaataa waxa timaha quruxda ka kaxeeya kana khariba timaha, hadii ay arimahaas iska ilaalisana waxaa usoo noqonaysa quruxdii timahaheeda.
Waa inaad timaha si fiican u nafaqaysaa, oo aad cuntaa cuntada protinka ka kooban maadada la yiraahdo kryatin � Creatine�, saas darteed waxaa fiican inaad cunto hilib aan lahayn subag iyo kaluun, ukun , fuul, waxa laga sameeyay caanaha ee uu subagu ku yar yahay, lawska, iyo faakahada ( furuut), sidaas ayeey iinsha Allaah dabeeciga quruxda timahaagu ku ilaalismeysaa, caafimaadna ku siineysaa.
Gawaarida London oo Lagu arkay Arin cajiib ah.
Gabar Lawaayay Habenkii Ugu Horeeyay Ee Aroos Keeda